Ciidanka Danab oo howlgal ku dilay xubno ka tirsanaa Al-Shabaab, kadibna qabtay - Caasimada Online
Home Warar Ciidanka Danab oo howlgal ku dilay xubno ka tirsanaa Al-Shabaab, kadibna qabtay
Ciidanka Danab oo howlgal ku dilay xubno ka tirsanaa Al-Shabaab, kadibna qabtay
Kismaayo (Caasimada Online) – Wararka laga helayo gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in ciidamada sida gaarka ah u tababaran Danab ee Xoogga dalka Soomaaliyeed ay howlgallo qorsheysan ka sameeyeen duleedka magaalada Kismaayo ee gobolkaasi.
Howl-galladan oo lagu bartilmaameedsaday xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa lagu khaarijiyey illaa 11 xubnood, halka nolosha laba xubnood oo kale.
Sidoo kale ciidamada Danab ayaa kusoo furtay howlgalladaais 6 qoray oo AK47 ah, hal qoray BKM ah, sida uu shaaciyey Taliye Carab Dheeg Axmed oo ah Taliyaha Ururka 5-aad, guutada 16-aad ee Kumaandooska Xoogga dalka Somaliyeed ee Danab.
Taliyaha ayaa xusay inay sii wadi doonaan howlgalladooda, isla-markaana ujeedkooda uu yahay, sidii Al-Shabaab looga saari lahaa halkaasi.
Dhanka kale ma jiro illaa iyo hadda wax hadal ah oo kasoo baxay Al-Shabaab oo ku aadan howlgalladaasi ee ay guulaha ka sheegteen ciidamada dowladda Soomaaliya.
Xaaladda ayaa weli aad u kacsan, waxaana dhaq-dhaqaaqyo ciidan laga dareemayaa deegaanada hoostaga magaallo xeebeedka Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose.
Inta badan waxaa gobollada Jubbooyinka ka dhaca dagaallo u dhexeeya ciidamada huwanta iyo dagaalyahanada Al-Shabaab oo weli ku xoogan gobolladaasi.